Inani lokudla okunomsoco we-Sesame unamathisele
1. I-Sesame paste (iTahini paste) icebile ngamaprotheni, ama-amino acid, amavithamini namaminerali, futhi inenani eliphakeme lezempilo. 2. Okuqukethwe yikhalsiyamu okunamathiselwe ngasesame kuphakeme kakhulu kunemifino nobhontshisi, kungokwesibili ngemuva kwesikhumba semfanzi. Kungcono ...
Izinzuzo zezempilo zepea protein powder
1. Kungakhuthaza ukusebenza kwezinso Olunye ucwaningo luphakamisa ukuthi ipea protein ingaba ngomunye wemithombo yamaprotheni ehamba phambili kubantu abanezinkinga zezinso. Eqinisweni, ngokocwaningo, ipea protein ingasiza ukubambezela noma ukuvimbela ukulimala kwezinso kulabo abane-high blood pressure. Kunga ...
Izinzuzo Eziyisithupha Nezizathu Zokuqala Ukudla Ibhotela Lamantongomane
Ukusabalala kwamantongomane okuthandwa kakhulu okuzoletha ushintsho oluhle ekudleni kwakho ibhotela lamantongomane. Yenziwe ngamakinati omisiwe futhi agazingiwe futhi ifakwa njalo eqenjini lokudla okunempilo. Igcwele izakhamzimba ezilusizo empilweni yakho inqobo nje uma ...
Izinzuzo eziyi-10 zezithelo ezisemathinini
1. Ukudla okulula - noma kunini, noma kuphi, okulungele ukudliwa ngokuvula amathini. 2. Yonga isikhathi - kanye uma uthenga, izidlo ezintathu zokungcebeleka. Gcina ubunzima bokupheka, ukujabulisa umndeni. 3. Ukudla okunomsoco - izinkathi ezine ...
Umsebenzi Wokwakha Ithimba.
Ukuze kuvuselelwe uthando lwabasebenzi ngomsebenzi, ukusungula ukuxhumana okuhle, ukwethembana, ubumbano nokubambisana phakathi kwabasebenzi, ukuhlakulela ukuqwashisa kwethimba, ukukhulisa umuzwa wabasebenzi wokuba nomthwalo kanye nokuba ngowabo, futhi ubonise isitayela seSan ...
Umhlangano Wenkampani iSanniu Ubanjelwe
Isikhathi siyandiza nesikhathi siyandiza. U-2020 omatasa udlule ngokuphazima kweso, futhi u-2019, ogcwele okulindelwe, uyeza kithi. Unyaka Omusha, uzalela imigomo namathemba amasha. Umhlangano waminyaka yonke ka-2021 weSanniu Company ububanjelwe eNew Era Hotel ku ...
Inani elidliwayo nezinyathelo zokuqapha ze-Yuba / Ezomisiwe Zabhontshisi We-Curd Sticks
Izinti zikabhontshisi ziqukethe amaminerali ahlukahlukene, zengeza i-calcium, zivimbela ukukhumuzeka kwamathambo okubangelwa ukuntuleka kwe-calcium, kukhuthaze ukukhula kwamathambo futhi kugxile emgqeni wesoya, kungumpetha wezokudla emikhiqizweni yesoya. Imvamisa udle i-yuba can b ...
I-Yantai Sanniu Import & Export Co, Ltd ingumenzeli oqeqeshiwe wokudla neziphuzo nenkampani yokupakisha engaphezu kweminyaka eyi-10.
Igumbi 203, No.310 Zhenzhong St, Fushan District, Yantai, Isifundazwe Shandong, PRC
Izinzuzo eziyisithupha nezizathu zokuqala i-Eati ...
Ukudla Amakinati Anosawoti, Induku entsha ye-Bean Curd, Amaphakethe Esoso Soy, Ikhukhi leLadyfinger, I-Hawthorn Strip, Izingane Amabhisikidi,